ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: နယ်စပ်အခြေစိုက် မြန်မာ့ စစ်ရေးလေ့လာသူတဲ့ ဗျား
Independent Journal အမှတ် (၃၆) မှာပါတာပါ
သူတကယ်ပဲ အဲသလို ပြောခဲ့ပါတယ်
ABSDF အတွက် သဘောထား မကွဲပေမဲ့
ကျန်တာတွေ အတွက် ခင်ဗျား နဲ့ ကျုပ် သဘောထားကွဲတယ်
သွေးရိုးသားရိုး ဖြစ်ပါစေလို့ ..ပဲ ပြောမယ် — with ဗညား ကြိုင်,Kotoe NB, Nyilay Naing and 18 others.
You, Ko Lin Wai Aung, Aung Thura, Min Thit Lwin and6others like this.
Ko Lin Wai Aung နယ်စပ်အခြေစိုက် မြန်မာ့ စစ်ရေးလေ့လာသူတဲ့ ဗျား
Independent Journal အမှတ် (၃၆) မှာပါတာပါ...
သူတကယ်ပဲ အဲသလို ပြောခဲ့ပါတယ်...
သွေးရိုးသားရိုး ဖြစ်ပါစေလို့ ..ပဲ ပြောမယ်....
January 18 at 4:55am · Like · 5
Ko Lin Wai Aungစစ်ရေး/နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေ...သတိထား.. သွေးရိုး သားရိုးဖြစ်ပါစေ.. သေဆုံးသွားသူတွေ အပေါ်မှာ....သမိုင်းသတ်တဲ့ထဲမပါအောင်သတိထားပါ...
January 18 at 5:04am · Edited · Like · 9
Maung Than Sweပါဂျောင်ကိစ္စအမြင်အပေါ်လုံးဝလက်မခံပါ။
January 18 at 9:43am · Like · 6
Htay Tint ၁၉၈၈ မှာ NDF ဥက္ကဌ စောမောရယ် ( ကရင်နီ ) က ကျောင်းသားတွေကို အကူအညီပေးဖို့ BBC ရေဒီယိုက ဖိတ်ခေါ်တာ မောင်မောင်ကျော် အရင်ဆုံး အသက်စွန့် ပြီး ဆက်သွယ်တာတွေ မေ့သွားပြီ ။
January 18 at 9:46am · Edited · Like · 5
Nay Thwe Ni ကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအပေါ်မှာ သူတို့ရဲ့သိက္ခာနဲ့ သမိုင်းကို ထပ်မသတ်ကြပါနဲ့...
January 18 at 10:03am · Like · 4
Shwe Sin Thetကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့အပေါ် သဘောထားက ဒေါက်တာနိုင်အောင်နဲ့ တလေသံတည်းပါလား..စစ်ရေးလေ့လာသူကြီးရေ... သတိလေးတော့ထားပါဦး....မိုးသီး၊နိုင်အောင်လောက်တောင်....အထက်ဗမာပြည်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်နဲ့AB မြောက်ပိုင်းဥက္ကဋ္ဌကိုထွန်းအောင်ကျော်က အရေးမပါတော့ပါလား...ကိုယ်ပြောတဲ့စကား ကိုယ်တာဝန်ယူဘို့ လိုပါလိမ့်မယ်....ရှင်တို့သမိုင်းတွေလှဘို့အတွက် အစတေးခံပေးရမဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိထားပါ..
January 18 at 10:30am · Like · 4
Shwe Sin Thet Nicky Shein ကွန်မြူနစ်လဲမစစ်၊ နိုင်ငံရေးလဲ နားမလည်၊ အဖေ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇောကြောင့် လူရာဝင်တဲ့လူက ပြောတာဆိုတော့ ပေါက်ကရဖြစ်တာပေါ့၊ ပိုဆိုးတာက သူ ဘာမှ မသ်တဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော် အတွင်းရေးကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ဝင်ရွှီးတာ အဆိုးဆုံးပဲ၊ အေဘီအကြောင်း ဘာမှ မသိလို့ ခုလိုပြောတာပေါ့၊ သူပြောခဲ့တဲ့ အေဘီ ခေါင်းဆောင် ၃ ယောက်ဆိုတာ တယောက်မှ အသုံးမကျဘူး၊ အဲ့ဒီ ၃ ယောက် စောက်သုံးမကျလို့ အေဘီ ပြိုကွဲခဲ့တာ၊ လူမျိုးစုတွေကို အောက်ကြို့ခဲ့တယ်ဆိုတာ သူတို့ ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေးအတွက်အောက်ကျို့တာ၊ တကယ်လူမျိုးစုတွေက ဗမာတွေအပေါ်နားလည်မှုရှီလာခဲ့တာ ဦးတင်မောင်ဝင်းက စခဲ့တာပဲ၊ နောက်ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံနဲ့ စုဖွဲ့ထားတဲ့ NCUB ခေတ်ရောက်မှ အားလုံး စုံညီ တပ်ပေါင်းစုကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာ၊ အသတ်ခံရတဲ့ ၁၅ ယောက်ကို ကိုယ်ချင်းမစာ လက်လွတ်စပယ် ထောက်လှမ်းရေးတွေ လို့ ထပ်ပြောပြီး စော်ကားတာဟာ၊ ကွန်မြူနစ် ပီသတဲ့သူမဟုတ်တာကို ဖေါ်ပြတာဖြစ်ပြီး မိမိရဲ့ နိုင်ငံရေးအမြင် နိမ့်ကျတာကိုလဲ ဝန်ခံတာဖြစ်တဲ့ စောက်ရူးတယောက်ပဲ၊နိုင်အောင် မိုးသီး ထွန်းအောင်ကျော် တို့ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနဲ့ ဖါးပြီးဆက်ဆံလိုက်တာဖြစ်တယ်၊ အဖေ တော်သလောက် တော်တော် စောက်သဲုးမကျတဲ့ မိဘမျက်နှာအိုးမဲသုတ်တဲ့ ဝမ်းတွင်းရူး သုံးစားလို့မရတဲ့ သားငပေါတကောင်ပဲဖြစ်တယ်။
January 18 at 10:35am · Like · 5
Tun Aungတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကအေဘီကိုဗမာလို့ဘဲမြင်ပြီးလက်ဝေခံအဆင့်ဘဲထားတယ်ဆိုတာတောထဲမှာနေခဲ့တဲ့အေဘီရဲဘော်သာမကတိုင်းရင်းသားတပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေး၇ဲဘော်တွေအကုန်သိပါတယ်။ အခုလည်းအေဘီကိုကေအိုင်အေကမျောက်ပြဆန်တောင်းချင်လို့လက်ခံနေတာကိုကိုယ်ဖက်ကလို့မထင်ကြပါနဲ့အချိန်မရွေးစစ်အဏာရှင်တွေဖက်ကိုအခွင့်အရေးရတာနဲ့ကြို့က်ဈေးရတာနဲ့ရောင်းစားခံရမယ်ဆိုတာအရင်ကလည်းကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့
January 18 at 12:34pm · Edited · Like · 5
Aye Aye Soe Win အပုတ်ချနေတာက ဘယ်သူလဲလေ။ မီးစတဖက်ရေမှုတ်တဖက်နဲ. ဆရာကြီး ကလဲ--မီးစကိုင်ထားတဲ.မမ က မက်ဆင်ဂျာမှာ အဖွဲ. အစည်းကို အားရပါးရ အပုတ်ချတဲ. အခါ--ဘာတလုံးပြောပါသလဲ။
February4at 11:27am · Like · 3
Aye Aye Soe Win စစ်အစိုးရကို အညံ. မခံနိုင်လို. အင်အားမညီမျှသော်လည်း၊ အေဘီသည် အောက်ကနေရပေမဲ. စိတ်ဓါတ်နဲ. ပြန်တိုက်တဲ.အခါ--သူတို.မပ ဇတ်လမ်းပြီးကထဲကအေဘီဟာ သေဆုံးသွားခဲ.တဲ. အဖွဲ. အစည်းဆိုပြီး ထိုးနှက်ခဲ.သူဟာ ဘယ်သူပါလဲ။ အဲဒီ.အချိန်မှာ အေဘီဟာ --အစိုးရမီဒီယာ အောက်မှာ တုံးအောက်က ဖားပါ။ သူတို.တင်ချင်တဲ.သူကိုတင်၊ ချချင်တဲ.သူကိုချ။ အဲတုန်းက အေဘီကို ကချင်အောက်က အတုကြီးလိုလို၊ စားသုံးလို. မရသလိုလို၊ ပြောခဲ.သူများ။ လါန်ခဲ.တဲ.လ ကပဲ--အစိုးရမီဒီယာကို ၀၀ကြီး အသုံးချပြီး--အမြော်အမြင်နည်းစွာ--စစ်အစိုးရအလိုကျ အလုပ်အကျွေး ထပ်ပြုခဲ.တာ ဘယ်သူပါလဲ။
February4at 11:33am · Like · 3
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 4:33 PM
Labels: ကိုညီညီကျော်, ဓါတ်ပုံဖိုင်